स्व.निलुलाई केकीको लेख, ‘सत्यलाई स्विकार्न सकिंन’ « Ramailo छ
स्व.निलुलाई केकीको लेख, ‘सत्यलाई स्विकार्न सकिंन’
नायिका केकी अधिकारी र दिवंगत निर्देशक निलु डोमा शेर्पा मिल्ने साथी थिए । आफुले निर्देशन गरेको पहिलो फिल्म ‘हाउ फन्नी’ मा स्व.निलुले केकीलाई अभिनय गराएकी थिइन् । तर, तिनै हितैषी केकी निलुको असमायिक निधनमा सँगै हुंन पाइनन् । देश बाहिर रहेका कारण निलुको अन्तिम दाह संस्कारमा पनि केकी उपस्थित हुंन सकिनन् । तर, दाहसंस्कार भएको दिन मंगलबार केकीले स्व.निलुका लागि मन छुने शब्दहरु लेखेर फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेकी छिन् । स्व. निर्देशक निलुका लागि केकीले लेखेको लेख हामीले जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेका छौं :
आज तिमीले हामीलाई छाडेर गएको पनि ४ दिन भैसकेको छ । केकु तिमी कत्ती सजिलै मनमा लागेका कुराहरु कति राम्ररी लेख्न सक्छौ भन्थ्यौ नि…तर कहिले काहिँ मनका भावनाहरु, यादहरु शब्दमा उतार्न एकदम सकस हुदो रैछ । यो सायद मेरो पहिलो लेखेको कुरा हुनेछ जुन तिमी पढ्ने छैनौं अनि यो बारे केही भन्ने छैनौ ।
I Love You भनेर तिमीले मलाई अन्तिममा भनेको शब्दहरु बारबार दिमागमा घुमि रहेको छ । सधैं खुशी मात्र दिने मान्छेले यती पीडा पनि दिन सक्छ भनेर मैले कहिले सोचेकै थिइनँ । तिम्रो उपस्थिति मात्रले माहोलमा कति फरक पार्थ्यो, सबैलाई हँसाउनु पर्ने तिमी कति राम्रो मान्छे थियौ भन्ने कुरा मैले तिमीलाई कहिल्यै भन्न पाइनँ । समय जत्ती पनि छंदै छ नि जस्तो लाग्थ्यो तर समय नै त हाम्रो हातमा नहुँदो रैछ । यसको अपसोच मलाई सधैं हुनेछ ।
जन्मेपछी मृत्यु शाश्वत कुरा हो, तर यो सत्यलाई स्विकार्न मैंले सकेकै छैन र अझै कति समय लाग्ने हो त्यो पनि थाहा छैन । तिमीले हरेक तिमीलाई भेटेका, जानेका अनि तिमीलाई नजिकबाट बुझेकाहरुमा धेरै प्रभाव पारेको छौं । निलु अनि यो अभाव हाम्रो जिवनमा कसैले पुरा गर्न सक्दैन । कोही कोहि मान्छे जिन्दगीमा यसरी आँउछ उस्ले नमेटिनेगरि आफ्नो छाप छोडेर जान्छ ।
तिम्रो अधुरो सपनाहरु पुरा गर्न त नसकुँला तर तिमीले जानी नजानी सिकाएर गएको पाठलाई जीवन रहेसम्म लागू गर्ने प्रयास गर्छु । तिम्रो जस्तै मायालु मन भगवानले सबैलाई दिए, यो संसार एकदम सुन्दर ठाँउ हुनेथ्यो । मलाई विश्वास छ, तिमी आज जहाँ पनि छौं त्यो ठाँउमा पनि यस्तै प्रभाव पार्नेछौ । तिम्रो आत्माको शान्तिको कामना गर्छु सधैं भगवानसँग
धेरै धेरै माया निलु !!
उहि तिम्रो प्यारी